အလုပ် 81 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Adeal International Myanmar
အရောင်းတားဂတ် ပြည့်မှီရေးနှင့် ဖြန့်ချီရေး တားဂတ်ပြည့်မှီရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း Segmentation အတိုင်း outlet များကို အကြိမ်ရေ မှန်ကန်စွာ သွားရောက် ရောင်းချခြင်း မိမိ အသင်းဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အား ကောင်းရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း အရောင်း စာရင်း report and information များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ တိကျမှန်ကန်စွာပေးနိုင်ခြင်း Cash collection များကို အချိန်မီကောက်ခံပေးရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း Customer များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရန်
ချေးငွေအရာရှိ (Loan Officer)
ဇလွန် | ဧရာဝတီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း
တာဝန်၊ ဝတ္တရားများ ၁။ ကနဦးကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းနှင့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်။ ၂။ အစည်းအဝေးကျင်းပ၍ ရပ်ရွာလူထု အသင်းသားများကို မဟာ၏ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းရှင်းပြရန်။ ၃။ မိမိ၏ ဖောက်သည်အဟောင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့် ဖောက်သည်အသစ်များကိုလည်း ရှာဖွေရန်။ ၄။ ရုံးခွဲ၏ ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝရန်နှင့် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ ကူညီနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ ၅။ ဖောက်သည်အသစ်များအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ချေးငွေရရှိရန်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အချိန်မှီဆောင်ရွက်ရန်။ ၆။ မတူကွဲပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ ၇။ ဖောက်သည်များအား အချိန်မှီငွေထုတ်ချေးပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၈။ ဖောက်သည်များ၏ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် နေအိမ်များကို စစ်ဆေးရန်။ ၉။ ဖောက်သည်များချေးငွေကို အချိန်မှီ ပြန်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၁၀။ ချေးငွေမှတ်တမ်းများကို Tablet တွင် စာရင်းသွင်းခြင်း။ ၁၁။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အထက်အရာရှိမှ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမည်။
အကျိုးအမြတ်: Bonus Incentive
Can lead to achieve the monthly target and able to work outside Yangon if need. Good Interpersonal, Communication skill, Reporting skill.
Sales Assistant (Direct Sales - Yangon)
- ရန်ကုန်ဧရိယာအတွင်း FTTH ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းချခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ - ဘေလ်စုဆောင်းခြင်း၊ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်း &customer ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ရမည်။ - FTTx ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေး၊ ကြော်ငြာခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်။ - FTTx ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Door to door marketing, Online sales channel, Tele sales channelများအတွက်တာဝန်ယူရမည်။ - လစဉ် KPI အောင်မြင်ရန် sales & marketing teamအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
- Computer Microsoft Office,Internet & Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - အပြောအဆိုယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - Sales Target များကိုပြည့်မှီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - Problem Solving Skill ကောင်းမွန်ပြီး၊ Customer complain များကိုဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ - အသင်းအဖွဲနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ရုံးချိန် - တနလ်ာ မှ စနေ (9 am to5pm) - အသက် - ၂၀ နှစ် မှ ၃၅ နှစ် အတွင်း - လစာညှိနှိင်း
စျေးကွက်အခြေအနေများကို လေ့လာပြီး လက်ရှိနှင့် အလားအလာရှိသော အရောင်းအခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမည်။ ရောင်းလိုအား ခန့်မှန်းချက်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးရည်မှန်းချက်များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲပါ။ ဌာနခွဲရှိ ဝန်ထမ်းများကို လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် သင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း။ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုရှိစေရန် လိုအပ်သည့်တို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။ အခြားဌာနခွဲများနှင့် ရုံးချုပ်များသို့ ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်း ဗဟုသုတနှင့် လုပ်ဆောင်သင့်သည်တို့ကို အသိပညာမျှဝေပေးခြင်း။ Assess local market conditions and identify current and prospective sales opportunities Develop forecasts, financial objectives, and business plans Bring out the best of branch’s personnel by providing training, coaching, development, and motivation Locate areas of improvement and propose corrective actions that meet challenges and leverage growth opportunities Share knowledge with other branches and headquarters on effective practices, competitive intelligence, business opportunities, and needs Address customer and employee satisfaction issues promptly Adhere to high ethical standards, and comply with all regulations/applicable laws Network to improve the presence and reputation of the branch and company Stay abreast of competing markets and provide reports on market movement and penetration planning, undertaking and overseeing product trials and regulatory inspections keeping up to date with changes in regulatory legislation and guidelines usingavariety of specialist computer applications providing advice about regulations to manufacturers/scientists ensuring that quality standards are met and submissions meet strict deadlines
အကျိုးအမြတ်: - Reward for over performance
Mandalay EHB Group of Companies
Learn Company’s products knowledge and services to meet customer needs. Promote, build and maintain strong, long-lasting customer relationships. Maintain awareness of competitors' initiatives. Conduct market research and identify new opportunities Actively pursue sales leads to achieve monthly target results. Collaborate with Operation Departments to ensure customer transactions are processed accurately and efficiently Other duties as assigned by Department Head
အကျိုးအမြတ်: Sales Commission (Unlimited) Office Uniform, Accommodation, Motorcycle, Fuel, Phone card & Bill
- Must be able to do marketing for pharmaceutical and medical product - Must be able to meet doctors, professors and management team of clinics and hospitals - Must be able to collect marketing information - Reviewing sales performance - Writing reports and other documents - Must have teamwork and achieve sales target
Uni Diagnostics Co.,Ltd
- အခြေခံကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်ရမည် -လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရမည် - Englishလို ပြောနိင် ရေးနိုင်ရမည် -လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားနိင်ရမည်